रात्रिकालीन व्यवसायमाथि सरकारको वक्र दृष्टि, निर्वाध व्यवसाय चल्न दिन पर्यटन बोर्डको माग | Ratopati
रात्रिकालीन व्यवसायमाथि सरकारको वक्र दृष्टि, निर्वाध व्यवसाय चल्न दिन पर्यटन बोर्डको माग
personप्रयास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १५, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । रात्रिकालीन व्यवसायमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध अझैं पूर्णरुपमा हट्न सकेको छैन । कोभिड–१९ पछि स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई देखाउँदै बन्द गरिएका अन्य व्यावसायिक क्षेत्रहरु खुला भइसकेको अवस्थामा सरकारले रात्रिकालीन सेवामा भने आंशिक प्रतिवन्ध कायम राखिरहेको छ ।
सरकारको यस्तो नीतिका कारण मनोरञ्जन पर्यटन व्यवसायको क्षेत्र अर्थात् रात्रिकालीन व्यवसायमा संलग्न हजारौं पर्यटन व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । विशेषतः रेष्टुरेन्ट, बार, डिस्को, क्यासिनो, रोधी घर, नाइट क्लब तथा स्पा सेन्टरहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् । सबैजसो व्यापार, व्यवसाय र अन्य पर्यटन गतिविधिहरु पूर्णतः खुला भइसकेको अवस्थामा रात्रिकालीन व्यवसायलाई मात्र नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिका कारण व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
‘हामीले ७–८ महिना निकै कठिन समय गुजार्नु प¥यो । जुन बेला आम्दानीको कुनै स्रोत थिएन, खर्चको त कुरै नगरौं । घरभाडा, कर्मचारी खर्च, बैंकको ब्याज, किस्ता भनिसाध्य छैन,’ रात्रिकालीन व्यवसाय संघ, ठमेलका सदस्य तथा व्यवसायी सुरेश पुरीले भने । बल्लतल्ल ७–८ महिनापछि खुलेको बजारमा पनि प्रहरीले धरपकड गर्न थालेको उनको गुनासो छ । ‘सरकार किन हामीप्रति यति अनुदार भइरहेको छ ? सबैजसो व्यावसायिक क्षेत्र खुलिसक्दा पनि हामीमाथि मात्र किन सरकार धरपकड गर्दैछ ?’ पुरीले प्रश्न गरे ।
यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अब व्यवसायबाटै पलायन हुनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारी नीतिकै कारण कयौं रात्रिकालीन व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । त्यसो त अहिले पनि सरकारले रात्रिकालीन सेवालाई पूर्णतः खुल्ला हुन दिइसकेको अवस्था होइन । रात्रिकालीन मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु होटल, रेष्टुरेन्ट, नाइट क्लब, बार तथा रोधीघरहरुलाई सरकारले रातको अधिकतम १०–११ बजेसम्म मात्र खोल्न दिएको छ । यस्तो नीतिले रात्रिकालीन व्यवसाय अघि बढ्न नसक्ने र आफुहरु टिक्न नसक्ने व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
रात्रिकालीन व्यवसायलाई रातभर चल्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म रात्रिकालीन व्यवसायको सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । व्यवसाय खोल्न ग्रिन सिग्नल दिए पनि सरकारले कति समय खोल्न पाउने भनेर यकिन गरेको छैन । यही अवस्थाको फाइदा उठाएर गस्तीमा खटेका सुरक्षाकर्मीले रात्रिकालीन व्यवसायमा अवरोध गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
लर्ड–ठमेल क्लबका सञ्चालक रविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कि त पूर्णरुपमै व्यवसाय बन्द गर भन्नुप¥यो, कि त स्वतन्त्ररुपमा व्यवसाय गर्न दिनुप¥यो । यसरी कति दिन व्यवसाय गर्ने ?’ श्रेष्ठका अनुसार सरदर साँझको ६–७ बजेबाट सुरु हुने रात्रिकालीन व्यवसायको पिकआवर (ग्राहक लाग्ने समय) १०–११ बजे हुन्छ । तर त्यतिनै बेला प्रहरी आउने र व्यवसाय बन्द गर्न दबाब दिने गर्नाले एकातिर ग्राहक भड्किने र अर्कोतिर आफूहरुले लाखौं लगानी गरेको व्यवसाय नै संकटमा पर्नेगरेको उनी बताउँछन् ।
पर्यटन बोर्डको दबाब
पर्यटन बोर्डले रात्रिकालीन व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा खोल्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ । अन्य सबै पर्यटन गतिविधि पूर्ण रुपमा खुलिसकेको अवस्थामा अब रात्रिकालीन मनोरञ्जन पर्यटनको क्षेत्रलाई मात्र नियन्त्रण गर्न नहुने भन्दै बोर्डले यस्तो माग गरेको हो ।
पर्यटन बोर्डका सिइओ डा. धनन्जय रेग्मी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ का कारण लामो समय सबैजसो व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित हुन पुगे । यसबाट विशेषतः अझ मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित हुन पुग्यो ।’ लामो अन्तरालमा बल्लतल्ल खुल्न पाएको पर्यटन क्षेत्रले अब स्वतन्त्ररुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सिइओ रेग्मीले भने, ‘अब सबै क्षेत्रलाई समान तरिकाले खुल्न दिनुपर्छ ।’
रात्रिकालीन व्यवसायलाई हेर्ने हाम्रो नजरलाई परिस्कृत र मरिमार्जित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यो वा त्यो बहानामा अब सरकारले रात्रिकालीन व्यवसायलाई अवरोध गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘रात्रिकालीन व्यवसाय अविलम्ब स्वतन्त्ररुपमा खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।’
योगी आदित्यनाथले फेरि दिए नेपालबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति
मध्यावधि निर्वाचनमा जाला मुलुक ?